मातृभुमीको अध्यक्षमा भुसाल
देउखुरी समाचारदाता देउखुरी, मंसिर । लमहीको मातृभुमी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको अध्यक्षमा भोजराज भुसाल निर्वाचित हुनुभएको छ । लमहीमा भएको संस्थाको दशौ साधरणसभा तथा चौथो अधिवेसनबाट भुसालको अध्यक्षतामा सात सदस्यिय नयाँ कार्य समिति सर्बसहमतिमा चयन गरेको हो । जसको उपाध्यक्षमा पार्वता भुसाल,सचिवमा प्रदीप अधिकारी, कोषाध्यक्षमा कमला भुसाल र सदस्यहरुमा होमकुमार श्रेष्ठ,विकास रजौरे,राधिका वली रहनु भएको छ । यसैगरी अधिबेसनबाट भिमबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय लेखा समिति गठन गरेको छ । संस्थाका अध्यक्ष भिमवहादुर बस्नेतको अध्यक्षता तथा लमही नगरपालिकाकी उप प्रमुख देवका बेल्वासेको ...
मुद्राको सहजै आपूर्ति : राष्ट्र बैंक
काठमाडौ - नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक गतिविधि विस्तार भएको अवस्थामा पनि कुशलतापूर्वक मुद्राको सहज आपूर्ति गर्दै आएको जनाएको छ । बैंकको ६३औँ वर्षिकोत्सवका अवसरमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले मुद्राको चलनचल्ती बढ्दै गएको आवस्थामा आपूर्ति सहज गरेको बताए । अर्थतन्त्रमा मौद्रिकीकरणमा सुधार भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्र बैंकले चालु आवको चैत मसान्तसम्ममा चलनचल्तीमा रहेको नोट रु चार खर्ब ७४ अर्ब ९५ करोड पुगेको उल्लेख गर्दै उनले ७७ वटा नोट कोषमा रु ५२ अर्ब रकम मौज्दात रहेको जानकारी दिए । गभर्नर डा नेपालले मुलुकभर नेपाली नोटको व्यवस्था ...
नेपाल राष्ट्र बैंकको साढे ३ खर्ब रुपैयाँमा आगो
काठमाडौं - राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म आफ्नो साढे ३ खर्बभन्दा बढी रुपैयाँबराबरका नोट जलाएको छ । ०७४ असार मसान्तसम्म ३ खर्ब ६१ अर्ब ४० करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरका नोट जलाएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष अर्थात् ०७३ असारदेखि ०७४ साउनसम्ममात्रै बिभिन्न दरका २५ अर्ब ७५ करोड ४२ लाख बराबरका नोटहरु जलाएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा छ । राष्ट्रबैंकले च्यतिएका तथा झुत्रा भएर चलन चल्तीमा ल्याउन अयोग्य नोटहरु जलाएको हो । बैंकिङ भाषामा यसलाई नोट धुल्याउने भनिन्छ । कसरी गरिन्छ नोट धुलाई ? बैंकले झुत्रा नोटलाई खिच्ने, ...
बैंकको यस्तो ‘बेइमानी’
काठमाडौं - राजधानीको शंखमूल बस्दै आएका दीपेन्द्र विष्टले करिब ३ वर्षअघि फाइनान्सिङ (बैंकबाट ऋण लिएर) मा कार (निजी सवारीसाधन) किने । प्यूठान स्थायी घर भएका विष्टले एक वाणिज्य बैंकसँग साढे ६ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण सम्झौता गरेका थिए । हाल उनको ब्याजदर बढेर साढे १२ प्रतिशत पुगिसकेको छ । यो शतप्रतिशत वृद्धि हो । साढे ६ प्रतिशतमा सम्झौता गरेको ग्राहकले साढे १२ प्रतिशत ब्याज तिर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विचार नगरी बैंकले एकतर्फी रूपमा ब्याजदर बढाएको छ । एक महिनामा ३ पटकसम्म बैंकबाट ब्याजदर वृद्धिको एसएमएस आएको उनले बताए । सोही बैंकमा ...
सामान्य बढ्यो यती डेभलपमेन्ट बैंकको नाफा, हेरौँ समग्र वित्तीय विवरण
यती डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा २१ करोड ७१ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा तीन दशमलव ८२ प्रतिशत बढी नाफा कमाएको हो । ले बढी हो । बैंकले गत वर्षको सोहि अवधिमा २० करोड ९८ लाख रुपैयाँ कमाएको थियो ।एक अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ चुक्तापुँजी भएको बैंकले जगेडा कोषमा २२ करोड ६२ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । निक्षेपमा ३२ दशमलव ६५ प्रतिशतले वद्धि गरी १२ अर्ब ३० करोड १५ लाख ...
मनास्लु विकास बैंकले नौ महिनामा कमायो चार करोड ५७ लाख मुनाफा
मनास्लु विकास बैंक लिमिटेडले चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा खुद मुनाफा चार करोड ५७ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ६६ दशमलव ६६ प्रतिशत बढी नाफा कमाएको हो । गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा बैंकले एक करोड ६३ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको थियो ।३० करोड ८३ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको बैंकले जगेडामा सात करोड ९७ लाख रुपैयाँ राखेको छ । निक्षेपमा ३६ दशमलव १३ प्रतिशतले वृद्धि गरी दुई अर्ब २८ करोड ...
बैंकर्सहरुलाई गभर्नरको आग्रह ‘अब सुस्ताउने होइन एक्टिभ बननुपर्यो’
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपालले बैंकर्सहरुलाई क्षमता देखाउन र सिर्जनशिल हुन आग्रह गरेका छन् । उनले बैंकर्सहरुलाई पहिलाजस्तो सुस्ताउने काम नर्ग आग्रह गर्दे क्रिएटिभ भएर काम गर्न आग्रह गरे । डेभलप्मेन्ट बैंकर्स संघको ११औं वार्षिक साधारणसभामा उनले पुँजीबृद्धिपछि बैंकहरुले आकार फेरेको उल्लेख गर्दै बैंकर्सहरु पनि एक्टीभ र क्रिएटिभ हुनुपर्ने बताए । विदेशमा वित्तीय संस्थाहरु नियामक निकायभन्दा एक स्टेप अघि हुने गरेको भन्दै डा. नेपालले नेपालका बैंकहरुलाई एक स्टेप अघि बढ्न आग्रह गरे । संघको साधारणसभाले नयाँ नेतृत्व चयन गर्दैछ । ...